Momba anay - Voafetra ny hazavan'ny EYELED
EYELED LIGHTING LIMITED dia mpamokatra LED Display avo lenta & mpamatsy vahaolana mpamonjy angovo hita any HongKong sy ShenZhen (orinasa iray any an-tanety) any Shina, manana famokarana isam-bolana 20.000 metatra toradroa ny efijery tarihina.
Miaraka amin'ny tsipika mivondrona mandeha ho azy sy ny tsipika fanamainana tombo-kase, izahay dia nanolotra ny LED Display amin'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao amin'ny vidiny vita any Chine sy ny kalitao azo antoka.
Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny haino aman-jery dokam-barotra any ivelany, hetsika ara-kolotsaina sy fialamboly, kianja, hotely, fampiratiana LED fampiratiana sy haingon-trano sns., Miaraka amin'ny tombony azo amin'ny fitaratra miloko feno, manomboka amin'ny famolavolana, famokarana, fametrahana hatramin'ny fikojakojana, fampiasana vahaolana omni-directional integrated mba hampihenana ny vidin'ny mpanjifa sy hanomezana tolotra akaiky kokoa ny mpanjifa.
EIMELED MAZAVA LIMITED dia tanterahina amin'ny fananganana endrika, famokarana dingana, fenitra rafitra rafitra; hametraka rafi-pandaminana sy rafitra fampiharana eo amin'ny sampana rehetra amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny olona, ​​ny tetika, ny varotra; fahombiazan'ny vokatra samy hafa hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa amin'ny tsena samihafa; Ny fianakaviana EYELED dia mikely aina mamaha ny olan'ny mpanjifa, manasongadina ny hafainganana, ny fahombiazana, ny fifandraisana akaiky, dia mamorona ny sandan'ny mpanjifa mandritra ny fotoana maharitra.
Ny ekipan'ny serivisy matanjaka, voaofana, mahay dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny serivisy fivarotana rehetra. Alohan'ny hamarotana dia manome drafitra teknika momba ny vokatra antsipirihany izahay; Amidy, mitarika sy mampiofana ny mpanjifa izahay hampiseho ny fametrahana efijery; aorian'ny fivarotana, manome serivisy fiantohana izahay ho an'ny lesoka.
Ny toerana misy anay any Shenzhen dia manome antoka anao ny logistics haingana sy mahomby amin'ny alehanao; Amin'ny rivotra, amin'ny lamasinina, an-dranomasina no misy rehetra. EYELED Display dia vonona ny ho mpiara-miasa LED azonao atokisana mba hahombiazan'ny orinasa.
Haben'ny orinasa 3.000-5000 metatra toradroa
Firenena / Faritra iasan'ny orinasa Tanàna Shiyan Distrikan'i Baoan Kota Shenzhen Provinsi Guangdong Sina
Laharana famokarana 10
Famokarana fifanarahana OEM Service OfferedDesign Service OfferedBuyer Label Natolotra
Tombam-bidy fanao isan-taona US $ 50 tapitrisa - US $ 100 Tapitrisa